Ranomasina tsara indrindra any Melbourne | Vaovao momba ny dia
Ny morontsiraka tsara indrindra any Melbourne
Maria Jose Roldan | | Aostralia, tora-pasika
Raha te-hiala sasatra any Melbourne ianao dia mety te-hitsidika betsaka araka izay azonao atao ao amin'ity renivohitry ny fanjakan'i Victoria any Australia ity. Tamin'ny 2011 dia voafidy ho tanàna tsara indrindra eto an-tany honenana izy, zavatra izay tsy isalasalana fa mahatonga ny olona maro te-hitsidika sy hahafantatra an'ity tanàna ity.
Eo amoron'ny moron'ny Port Phillip Bay no misy azy. Ho fanampin'izay, manana maritrano Victoriana sy ankehitriny izay manolotra ny mpizahatany sasany amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any Aostralia izy. dia Te hilaza aminao momba ny morontsiraka sasany tsara indrindra any Melbourne aho Ka raha mankany amin'ity tanàna aostralianina lehibe ity ianao mitady ny torapasika tsy mampino, dia manana lisitra tsara hisafidianana sy hankafizinao.
1 St. Kilda Beach
2 Brighton amoron-dranomasina
3 Tora-pasika Mordialloc
4 Williamstown Beach
5 Morontsiraka Sorrento
6 Morontsiraka Elwood
7 Morontsiraka Altona
8 Torapasika hafa tokony ho fantatrao
Ny iray amin'ireo morontsiraka malaza indrindra dia tsy isalasalana fa ny St. Kilda Beach, izy dia morontsiraka mety ho an'ny filomanosana ary koa ho an'ny fanatanjahantena rano noho ny rano tsy mampino. Avy amin'ny seranan-tsambo dia manana fidirana an-tsehatra mahafinaritra miaraka amin'ny fasika mahafinaritra ianao, afaka mankafy ny fomba fijery mahavariana ny tanàna.
Raha tonga eo amoron-dranomasina ity ianao dia afaka mandray ny sambo mitondra anao mankany Williamstown na Southbank. Ny safidy tsara hafa dia ny Brighton Beach, iray amin'ireo morontsiraka mahafinaritra indrindra eto Melbourne. Izy io dia manana trano fandroana misy loko maro eo amoron'ny moron-dranomasina, toerana mety indrindra ho an'ny mpilomano, na mpandroakan-driaka, na mpialokaloka izy io. Rehefa mitsoka ny rivotra dia misy onja tsara tarehy mendrika ho an'ny surf, na dia toerana tsara aza izany raha tianao ny manjono.
Ankoatr'izay, ny morontsiraka dia an-tongotra lavitra avy amin'ny trano fisakafoanana, fivarotana ary kafe, izay mahatonga an'i Brighton Beach ho iray amin'ireo malaza indrindra.
Raha ny tadiavinao dia morontsiraka izay manana mihoatra ny fasika sy rano fotsiny dia ho tianao i Mordialloc. I Mordi dia faritra manodidina atsimo atsinanana ary toerana izay tsy maintsy tsidihinao noho ny hatsarany. Izy io dia manana trano fisakafoanana, kianja filalaovana barbecue, faritra fitsangantsanganana, lalan-bisikileta ... ary seranan-tsambo izay tianao hovangiana.. Morontsiraka be mpitia io, koa raha te hisoroka ny vahoaka betsaka ianao dia tsara indrindra ny tsy mandeha amin'ny faran'ny herinandro.
Ity morontsiraka ity dia fantatry ny mponina amin'ny anarana hoe 'Willy Beach', somary kely izy io nefa manana hatsarana maro, ankoatr'izay, dia tena akaikin'ny tanàna izy io. Izy io dia morontsiraka malaza ho an'ny mpilomano, mpanao sunbakers, ary tantsambo, saingy ny fomba fijery mahatalanjona izay mitaona ny olona ho any Williamstown manan-tantara. Raha ho hitanao ny fahagagana hataony dia ho fantatrao izay lazaiko.
Handeha an-tongotra dimy minitra fotsiny avy eo amin'ny gara dia ho hitanao ny fomba fijery mazava sy tsy voafehy momba ny lanitra eny an-tanàna - tsara tarehy amin'ny antoandro ary mahavariana amin'ny alina. Tsy mahagaga izany Williamstown ho tonga fidirana tsara ho an'ny Taom-baovao, izay olona marobe no mivory manao afomanga izay tian'ny rehetra mankafy.
Sorrento morontsiraka dia mahafinaritra amoron-dranomasina. Manakaiky ny ranon'ny Port Phillip Bay satria misy azy ireo amin'ny lafiny iray ary Bass Strait amin'ny lafiny iray, io no toerana mety indrindra hankafizana ny filentehan'ny masoandro. Ilaina ny manao dia lavitra mba hankafizanao ny hakanton'ny fasika sy ny rano ao aminy.
Fiara 20 minitra avy eo afovoan-tanànan'i Melbourne, Elwood Manintona ny fianakaviana manontolo ny torapasika. Ankoatry ny moron-dranomasina dia manana fotodrafitrasa maro koa izy hankafizana ny andro toy ny barbecue, piknik ary faritra filalaovana eo amin'ny bozaka. Toy ny hoe tsy ampy izany, manana faritra azo antoka izy io mba afaka milomano mangina, na dia tianao aza ny mifindra bebe kokoa dia mandehana mitsangantsangana sy bisikileta eny amorontsiraka ihany koa.
Melbourne's Altona dia toerana tsara raha mila andro kamo eo amoron-dranomasina ianao. Taloha lasa izay, ny ranon'i Altona dia nalaza noho ny ahidrano gaga nananany. Androany, miaraka amin'ny fanadiovana isan'andro ataon'ny matihanina amin'ny toerana, ny ranon'i Altona Madio kokoa noho ny hatramin'izay izy ireo ary toerana milomano mahafinaritra.
Misy ny faritra amoron-dranomasina izay natokana manokana ho an'ny kitesurfing. Toy ny hoe tsy ampy izany, manana trano fisakafoanana sy kafe ary toerana fialamboly hafa koa izy io.
Torapasika hafa tokony ho fantatrao
Ho fanampin'ireo morontsiraka rehetra nolazaiko taminao fotsiny - fa afaka efa manoratra ianao hahita ireo mahaliana anao indrindra- misy koa ireo hafa izay azo antoka fa hahaliana anao ary raha manam-potoana bebe kokoa ianao, afaka mieritreritra ny hahafantatra koa ianao. Ny sasany dia (ary mety tsara hifaliana miaraka amin'ny fianakaviana):
Carrum - eo am-bavan'ny reniranon'i Patterson-
Araka ny efa hitanao, tsy vitsy ny morontsiraka misy an'i Melbourne. Raha mikasa ny handeha ho any Melbourne ianao dia ho hitanao fa eto amin'ity tanàna Australiana ity dia afaka mahita moron-dranomasina ho an'ny tsiro rehetra ianao, hankafy ny fandroana, hanao hetsika rano, handany andro iray miaraka amin'ny fianakaviana, hanana barbecue, hankafizana fitsangantsanganana antoandro na tsotra, mandeha sy mankafy ny tontolo.
Ny fandehanana eny amoron-dranomasina dia hevitra tsara handosirana ireo tanàna marobe, satria i Melbourne no tanàna faharoa be mponina indrindra ao Aostralia, ka azonao atao ny mahatsapa fa misy fiainana mampiady saina ao anatin'ny arabeny. Ho an'ireo mponina ao aminy, ny morontsiraka dia toy ny valizy fandosirana mety tsara hankafizany ny fiainana ivelan'ny tanàna, hanadino ny raharaha isan'andro sy hankafizantsika ny fahagagana, ny habeny ary ny hasarobidin'ny ranomasina amintsika ary ny fahatsapantsika izany.
Ka raha manana fotoana mety hitetezana an'ity morontsiraka Aostraliana ity ianao, aza misalasala mandray sarintany, jereo hoe aiza no hipetrahanao ary hahitanao ny moron-dranomasina tianao indrindra handaniana andro sy hankafizinao. Ary raha te-hitrandraka ianao dia mitadiava fitateram-bahoaka na manofa fiara handehanana lalana fohy ary hahafantatra ireo morontsiraka faran'izay betsaka azo atao mandritra ny fitsidihanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ny morontsiraka tsara indrindra any Melbourne
Dia mankany Okinawa, tropikaly Japon